Prasta Khabar-सेवाग्राहीलाई सकस कहिलेसम्म मेयर ज्यू?
श्रीमान् मेयर ज्यू
विषय: सेवाग्राहिले सकस भोग्नु परेको सम्वन्धमा ।
प्रस्तुत विषयमा म हजुर सामु के अवगत गराउन चाहन्छु भनेदेखि हेटौडा उपमहानगरपालिका कार्यलयमा म जस्तै दैनिक सयौंको संख्यामा आउने सेवाग्राहिहरुले सहज वातावरणमा सेवा लिन पाइ रहेका छैनन् ।
मैले नव घर निर्माणको ईजाजत पत्र लिनको लागि चालेको प्रक्रिया दुई महिना वित्न लागि सक्दा पनि मेरो हातमा आजको मिति सम्म त्यो कागज परेको छैन । कहिले कर्मचारी विदामा वसेको कारण काम नहुने त कहिले कर्मचारी जनतालाई सेवा दिने समयमा आकस्मिक वैठक वसेको कारण । कर्मचारी उपस्थित भएको समयमा पनि कर्मचारी आफ्नो सम्वन्धित निकाय स्थानमा नबसेको र सेवाग्राहि स्वयं आफै सम्बन्धित कर्मचारीलाई खोजी आफ्नो काम गराउनुपर्ने वाध्यता म आफैले भोग्ने मौका पाएँँ यो दुई महिनाको उपमहानगरपालिकाको दौडधुपमा ।
आज पनि मेरो काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको र केहि त्रुटिका कारण अधिकृत ज्युको हस्ताक्षर गराउनुपर्ने र म वहाको कार्य कोठामा पुगे तर वहा हुनुहुन्न थियो । वहाँलाई पर्खि बसेको एक घण्टा पश्चात थाह पाए मेयर ज्युले राख्नु भएको वैठकको लागि जानु भएको छ भनेर। नगरपालिकाले दिने सेवा अबको दस मिनेटमा सकिदै छ र म निराश भई घर फर्किनु पर्ने वाध्यता त छदै छ। म त यहि वजार निवासि भोली आएर काम सकौला तर अलि टाढाका जनता जो सेवा लिन नगरपालिका सम्म आउनुपर्ने वाध्यता छ तिनीहरुलाई कतिको सकस महसुस हुन्छ होला।
यसरी नै जनताले कहिले सम्म सकस भोग्नु पर्ने हो ? कहिले जनता खुसि भएर सहज वातावरणमा काम भएको महसुस गर्न पाउलान् ? आशा छ आगामि दिनहरुमा काम परेर नगरपालिका प्रवेश गर्दा सहज तरिकाले काम भएको वातावरण पाउनेछौ। र अन्तयमा कुनै पनि वैठक वस्नु परेमा कार्यलय समय भन्दा अगाडी वा पछाडि वस्न अनुरोध जस्ले गर्दा हामि सेवा लिन वाट वन्चित हुने थिएनौं ।